Caawiyaha Zidane oo ka warbixiyay mustaqbalka Sergio Ramos ee kooxda Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 29 Jan 2021. David Bettoni oo ah caawiyaha tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ka hadlay mustaqbalka Sergio Ramos, isagoo carabka ku adkeeyay inuusan ka walaacsaneyn xaalada ciyaaryahanka ee kooxda.
Sergio Ramos oo 34 jir ah ayaa heshiiska uu kula jiro kooxda Real Madrid wuxuu dhacayaa xagaaga soo aadan, wuxuuna haatan xaq u leeyahay inuu qandaraas la galo koox kasta oo uu ku biiri karo kaddib dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Waxaana jira warar sheegaya in Sergio Ramos uu u sheegay maamula Real Madrid wadahadalada uu kula jiro kooxo dhowr ah, taasoo keentay in Los Blancos ay iloowdo arinta ah inay dalab cusub u gudbiso Ramos si qandaraaska loogu kordhiyo.
Haddaba David Bettoni oo ka hor kulanka Levante ka soo muuqday shirka jaraa’id ee kooxda Real Madrid maadaama Zidane uu ku dhacay caabuqa Korona Fayras, ayaa wuxuu ka hadlay mustaqbalka Ramos, wuxuuna yiri:
“Cusbooneysiinta qandaraaska Sergio Ramos? Kama walwalayo, waa kabtankeena, waa ciyaaryahan weyn oo xirfadle ah, laakiin wax kale ma dhihi karo.”
“Ramos wuxuu leeyahay qalbi weyn, waa kabtanka kooxda mar walbana wuu joogaa, wuu ka xanaaqsan yahay inuusan ciyaari karin, wuxuu tusaale fiican u yahay ciyaaryahan xirfadle ah.
Intaas kaddib David Bettoni ayaa waxaa wala weydiiyay xaallada uu haatan ku sugan yahay Zinedine Zidane, wuxuuna yiri:
“Wuu fiicanyahay, maalin walbana waan lahadlaa. Dabcan, waxaan dareemaynaa maqnaanshihiisa maadaama uu leeyahay soo jiidasho u gaar ah.”